Mareykanka oo cunaqabateyn saaray wasiirka arrimaha dibaada Iran Mohammad Javad Zarif | Burconews
Burconews.net:-Wasaaradda Maaliyadda Mareykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogtay wasiirka arrimaha dibadda Iran Mohammad Javad Zarif.
Cunaqabateynkan ayaa wuxuu saameynaya dhammaan hantida uu Mr Zariff uu Mareykanka ku leeyahay in la xayiro” ayey tiri wasaaradda maaliyadda.
“Javad Zarif wuxuu meel mariyaa siyaasadaha khatarta leh ee hoggaamiyaha ruuxiga Iran Ayatollah Ali Khamenei” ayuu yiri wasiirka maaliyadda Steven Mnuchin.
Mr Mnuchin ayaa Mr Zarif ku tilmaamay inuu yahay “afhayeenka Iran caalamka uga hadlo”.
“Mareykankana wuxuu farriin cad uu u dirayaa xukumadda Iran oo aan la aqbali karin dabeecadaha ay la soo baxday” ayuu yiri.
“Sida oo kale xukumada Iran waxay shacabka Iran u diidday iney helaan adeegga baraha bulshada, Wasiirka arrimaha dibada Iran Mohammad Javad Zarif wuuu dacaayadihiisa siyasadeed uu sii mariya baraha bulshada,” ayuu yiri Mr Mnuchin.
Iyada oo Mr Zarif cunaqabateynkaasi uu saaran yahay haddana wuxuu safar uu ku joogaa New York isaga oo ka qayb galayo shirka ganacsiga looga hadlayo ee qaramada midoobay, ayuu yiri wariyaha BBC Gary O’Donoghue oo u warramay wargeyska Washington Post.
Ka gudub Twitter daabacaad W.Q @JZarif
“Sababta uu Mareykanka aniga ii bartilmaameedsanayo ayaa waxay tahay aniga waxaan Iran caalamka uga ahay afhayeenka ugu horreeya. Mar la weydiiyey ma tahay arrintan mid dhab ah isla-markaana xanuun badan? Wuxuu ku jawaabay.
“Waad ku mahadsan tihiin inaad anigu ii aragtaan inaan halis weyn ku ahay siyaasadihiinna.”